Psalm 14 NIVUK - Nnwom 14 NA-TWI | Biblica América Latina
Psalm 14 NIVUK - Nnwom 14 NA-TWI
1Nkwaseafo ka wɔ wɔn koma mu se, “Onyankopɔn bi nni hɔ.” Wɔn nyinaa yɛ atorofo na wɔayɛ bɔne akɛseakɛse; na wɔn mu baako mpo nyɛ papa.
2 Awurade wɔ soro hwɛ adasamma mu sɛ obehu onyansafo a ɔsom no wɔ wɔn mu anaa. 3 Nanso wɔn nyinaa afom; wɔn nyinaa bɔne yɛ pɛ. Wɔn mu baako mpo nyɛ nea ɛteɛ; ɔbaako mpo nni hɔ. 4 Awurade bisa se, “Enti wonnim? Saa nnebɔneyɛfo yi kyerɛ sɛ wonnim nea wɔreyɛ? Wɔbɔ me nkurɔfo korɔn na wɔtena ase nanso wɔmfɛre me.”
5 Nanso wɔbɛbɔ wɔn hu efisɛ, Onyankopɔn te wɔn a wotie no mu. 6 Nnebɔneyɛfo sɛe ɔhobrɛasefo nhyehyɛe, nanso Awurade ne ne guankɔbea. 7 Mebɔ mpae sɛ, nkonim befi Sion aba Israel. Sɛ Awurade bɛsan agye Israel bio a, anka wɔn ani begye yiye.
NA-TWI : Nnwom 14